Fifidianana solombavambahoaka :: Velona sahady ny fanoherana vokatra hiteraka savorovoro • AoRaha
Fifidianana solombavambahoaka Velona sahady ny fanoherana vokatra hiteraka savorovoro
Tsy milamina! Tsy mivoaka akory ny voka-pifidianana vonjimaika dia efa teraka sahady ny savorovoro miendrika tsy fanekena ny valin’ny latsa-bato tamin’ny fifidianana solombavambahoaka, tamin’ ny alatsinainy 27 mey 2019 lasa teo. Tranga efatra no efa mandindona ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Mifototra amin’ny fanahiana ny fisiana hala-bato ny hetsika nataon’ny mpomba an’ireo kandidà tsy miankina.
Nitranga izany tao Ambositra sy Maroantsetra, Bealalana. Mitarika vonjimaika amin’ny voka-pifidianana tsy ofisialy mivoaka amin’ny tranonkalan’ny Ceni ireto kandidà tsy miankina ireto ka manahy ny mety ho fisiana paikady politika hampitsimbadika ny vatony ho lasan’ireo kandidà hafa ry zareo.
Tao Ambositra, ohatra, dia voalaza fa nambenan’ireo mponina ny tranona kandidà iray nahiana ho nitazona ny vata fandatsaham-bato nampiasaina tamin’ny fifidianana. Tao Midongy Atsimo indray dia misy loholona iray no voalaza fa voasoketa ho nandika lalàna noho ny fanohanany kandidà… Omaly, ihany koa, dia namaky bantsilana an’ireo voalaza fa lesoka nanodidina ny fikirakirana ny fifidianana sy ny ahiahy amin’ny mety ho fisiana hosoka ireo kandidà depiote avy amin’ny antoko Tim. Nambaran’izy ireo, tetsy Bel’air, fa hisy ny fitondrana ny raharaha eo anivon’ny Fitsarana.
Ankilan’izay, fitarainana maro no voarain’ny Ceni, etsy Alarobia, nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ohatra, fa: “ankoatra ny olana teo amin’ny lisi-pifidianana dia betsaka ireo kandidà nahatsikaritra ny fisiana fividianana ny vaton’ireo mpifidy. Mitaraina ihany koa ireo kandidà sasany, hoy izy, fa nisy ny famenoana na fanentsenana vato tsy ara-dalàna an’ireo vata fandatsaham-bato ireny ».
« Tsy vitan’izay fa eo ihany koa ny hoe fampiasana kara-panondro hosoka nentina nifidy. Mbola fitarainana am-bava ireo voaray ireo ka miandry ny fitoriana miaraka amin’ny porofo izahay”, araka ny fanampim-panazavana.
Aorian’ny famoahana amin’ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika amin’ny 15 jona 2019 vao handray sy handinika an’ireo fitoriana manodidina an’iny fifidianana depiote iny ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC). Manana enina ambin’ny folo andro kosa izy ireo hamaliana an’izany miaraka amin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialiny.
Tranga mampiahiahy. Tao Toliara II no nahenoana ny fisiana andian’olona nandoro ny biraon’ny ivon-toerana fanisam-bato eo ambany fiahian’ny Ceni (Srmv). Antontan-taratasy mirakitra ny voka-pifidianana tamina kaominina miisa telo tamin’ireo telo amby roapolo no may tanteraka. “Na izany aza, efa nisy ny vokatra voarain’ny Ceni ary azo hamarinina amin’ny voka-pifidianana avy amin’ireo delegen’ny kandidà izany”, hoy hatrany ny filoha lefitry ny Ceni, omaly. Nandray fepetra amin’ny fiambenana an’ireo Srmv rehetra manerana an’i Madagasikara ny Ceni.
Fandikana fepetra Voasambotra ny inspektoran’ ny Fananantany iray
Fiainana mpanakanto :: Naverin’ny mozika tany an-tsekoly ireo valo lahy teny an-dalambe
Fanarahamaso ny fifidianana :: Manahy amin’ny fahamarinan-toeran’ ny Antenimiera ny fikambanana Safidy